Al-Shabaab oo wacad ku martay in ay weerarro hor leh ku qaadayso ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo wacad ku martay in ay weerarro hor leh ku qaadayso ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya Febraayo 07, 2012
Al-Shabaab ayaa Talaadadii (7-da February) wacad ku martay in ay sii wadayaan weerarrada ay la beegsanayaan ciidamada DFKMG ah iyo kuwa Itoobiya ee jooga Beledweyne inta ay meeshaa isaga huleelayaan, sidaa waxaa sheegtay Idaacadda Shabeelle eek u taal Soomaaliya. Qodobbo la xiriira
Bishii hore ayay ciidamada dawladda iyo kuwa xulafadu dagaalyahaniinta al-Shabaab kala wareegeen magaalada. War kaa la xiriira, bam la macmalay ayaa ku qarxay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, waxaanu dhaawacay hal qof, sidaana waxaa sheegtay Wakaaladda Wararka Soomaliyeed, SONNA. Taliyaha ciidanka AMISOM, Jen. Fred Mugisha ayaa muwaaddiniinta uga digey in ay iska jiraan qaraxyada macmalan oo ay u soo sheegaan maamulka. Al-Shabaab ayaa qaraxyada macmalan ku xabaalaysay meelaha rayidku deggan yihiin bilihii ina dhaafay, sida ay sheegtay wakaaladda wararku.